Mangaphi amaqanda ekufuneka elale ukuze awabeke kwi-incubator? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Mangaphi amaqanda ekufuneka elale ukuze awabeke kwi-incubator?
Wonke umntu uyayazi inyani yokuba amaqanda ayimveliso enokonakala, kuba nesting yenzeka nge-nm, ngenxa yoko awunakuwashiya ixesha elide, ngakumbi ukuba uthatha isigqibo sokususa ii-nestlings kuzo, kuya kufuneka ubeke amaqanda amatsha kwi-incubator ngaphezulu kweentsuku ezingama-5-7.
Umhlobo une-incubator encinci kwaye ulele apho amaqanda amatsha kuphela - kangangexesha elingaphezulu kweveki, ebekiwe.
Ngelixa i-incubator ixakekile- sisengathenga amaqanda angabinayo, kwaye kwakhona ikhefu - kwaye kufuneka silinde iveki. Kuba kwakhona uqokelela kwaye ugcina kwindawo epholileyo.
Ngaphambili, kwilali yeenkukhu, ezinye zazifuya iintsapho ngokwazo. Kwenzeka ukuba iinkukhu ezisixhenxe nesixhenxe zibanjiwe, andiphindanga ndabuya. Kodwa ayizizo zonke iinkukhu ezisencinci ezihlala emaqanda, kwaye oku kuthetha ukuba ukuveliswa kweqanda nokuba yinkukhu elungileyo akunakuba ngaphezulu kweqanda elinye yonke imihla yesibini. Kuvela ukuba kangangeentsuku ezilishumi elinesihlanu, inkuku yenkuku; ukuzilungiselela umntwana wakho-nokuba umntu ubeka amaqanda yonke imihla. Kwaye iimeko. apho zigcinwe kude neefriji-ukuya kuthi ga kumashumi amabini amabakala. Ewe, yenzekile kwaye yahlengahlengiswa kwezinye iithokazi, ukuze ihlale ngokukhawuleza kumaqanda.
Incubator nayo irhoxisiwe. Kodwa ukusuka kwi-hens ezinokulala ezintlanu, amaqanda amatsha aqokelelwa iiveki ezimbini, kwavela ukuba kunento emalunga namaqanda angama-40-50. Bayigcina kwigumbi elikwindawo epholileyo, amaqondo obushushu ayekwindawo ethile ade afike kwi +20 degrees. Utat'omkhulu uqwalasele amaqanda ukuba acaphule; Ngendlela yakhe - wothuka emva kweentsuku ezilishumi ebhedini wagqiba ubukho bemibungu ngesplash. Ukuba igcinwe kwindawo epholileyo, oko ke akuchazi ukuba wayethetha njani. Isivuno sasiyipesenti engama-80 ...
Usapho lwam lwalukade lubandakanyeke kwi-incubator, lwenza i-incubator ukusuka kwisiqandisi esidala. Ngoku ubandakanyeka kwi-incubation, u-anti, ugcina amaqanda angama-50000 XNUMX ngonyaka.
Ukuba i-incubator encinci, kungcono ukubeka amaqanda amatsha kuyo.
Ukuba i-incubator inkulu, ke kuya kufuneka uqokelele amaqanda, emva koko ulale.
Ubomi beshelufu bamaqanda bohlukile, kuninzi kuxhomekeke ekubeni yeyiphi amaqanda ofuna ukuyifaka kwi-incubator. Ukuba ubeka amaqanda kwi-incubator, ke yeyona nto ilungileyo eshalofini yamaqanda ama-incubator kwiveki enye.
Ukuba iqanda ligcinwe ngaphezulu kweentsuku ezisi-7, ke ukubambeka kwenkukhu kuyancipha.
Siphinde sibeke amaqanda kwi-incubator, egcinwe iintsuku ezili-9, kumaqanda angama-40, iinkukhu ezingama-25 zibanjiwe.
Amaqanda edada angagcinwa ngaphezulu kweveki e-1 kude kube I-10 - iintsuku ze-11ngaphambili Iintsuku ezili-10 ukuya kweli-11 ungagcina amaqanda e-turkey, kodwa amaqanda e-goose anokugcinwa ixesha elide kude kube I-15 - iintsuku ze-16.
Amaqanda edada edumba le-incubator anokugcinwa kangangeentsuku ezili-10 ukuya kweli-15. Amaqanda ahlukeneyo, amaxesha ahlukeneyo okugcina.
Kwakhona, okuninzi kuxhomekeke kubushushu bokugcina. Elona xabiso liphezulu lokugcina iqanda kwi-incubator ngama-+8 degrees +12 degrees.
Ngaphambi kokubeka amaqanda kwi-incubator, kufuneka ihlolwe kakuhle.
Amaqanda enkukhu kufuneka agcinwe iintsuku ezingama-5-7, emva koko kufuneka abekwe kwi-incubator. Ukuphucula ukusebenza kwemibungu, amaqanda abekwa ngaphakathi kwi-incubator kwaye afakwe iiyure ezi-5 kwiqondo lokushisa lama-38 C. Emva koko ashenxiswa kwindawo enobushushu obuphantsi, apho agcinwa khona ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-15.
Xa sathenga i-incubator, ke kunye nayo yayingumyalelo obekaqokelele ukuba ukuqokelelwa kwamaqanda aqandusayo akufuneki kugqithe kwiintsuku ezili-10. Ngexesha elifanayo, ukugcinwa kwabo kufuneka kuqhubeke kwiqondo lokushisa elingaphantsi kwe-10 degrees.
Amaqanda okufakwa incubation akhethelwe ubungakanani obuphakathi, acocekileyo (angahlanjwa), kwanombala we-matte ngobukrwada obuncinci.
Kwaye okungcono, jonga amaqanda ngaphambi kokubeka kunye ne-ovoscope, esele ibona iziphene kwinqanaba lokuqala.
Ukusukela ngoko, besiyigcina le mithetho, ukubonwa kwayo kusoloko kwahlukile, ngamanye amaxesha kulungile (malunga ne-100%), kwaye ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba kube ngamaipesenti ezingama-70.
Amaqanda okufakwa kwi-incubation angagcinwa ngaphezulu kweentsuku ezilishumi, kodwa kwakhona, kwangaxeshanye, umthetho wobushushu kufuneka uqatshelwe. Iqondo lokugcina lamaqanda anjalo akufuneki libe ngaphezulu kune-15 degrees kwaye libe ngaphantsi kwe-8 degrees.
Ukugcinwa kwamaqanda enzelwe ukubeka i-incubator kunikwa ukubaluleka okukhethekileyo. Emva kokudilizwa, bakhula ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukuba imigangatho yokugcina ayilandelwa. Iimeko ezifanelekileyo zingumxholo weqanda kulawulo lobushushu lwee-degrees ezingama-812 kunye nokufuma okulinganayo okungama-7075% / amaqondo obushushu, asondele kuma-20 degrees, kukhokelela ekufeni kwe-umbungu, umswakama ophantsi womoya uya kukhokelela ekulahlekelweni ngumswakama ngeprotheni. Yonke le nto ngokudibeneyo iya kukhokelela kwi-hatch ephantsi.
Ukugcinwa kwamaqanda ixesha elide kunamaxesha afanelekileyo kunye nosuku ngalunye kunciphisa ubulunga babo kunye nokubambeka.
Amaxesha okhetho agcinekileyo:
inkukhu kunye namaqanda eenciniba ukuya kwiintsuku ezi-5;
I-turkeys ukuya kwiintsuku eziyi-7;
duck kunye goose ukuya kwiintsuku ezisi-8.
Kubaluleke kakhulu ukukhetha amaqanda ukuba ungafakwa kwigumbi lomoya elikwisiphelo se -inafuse, intloko yombungu ibekwe apho.Ukuba eli gumbi lisecaleni okanye kwicala elibukhali, kungcono ukwala iqanda. Ubungakanani begumbi lomoya linokubonisa ukuba mdala kangakanani iqanda. Kwiinkukhu, ubungakanani begumbi akufuneki bube ngaphezulu kwe-2 mm ukuphakama, amadada kunye neebhloke ezingabi ngaphezulu kwe-35 mm, kwi-goose 3,54 mm, Caesarean 1,4 mm.Ukuba zonke ezi paramitha zingasentla ziyaqatshelwa, ngoko ke ukubekeka kuya kuba yi-50%.
Ukuba kunokwenzeka ukugcina amaqanda okufakwa kwi-incubator ingabi ngaphezulu komhla, ke ukubanjiswa kwezilwanyana ezincinci kuya kuba yi-81,8% ngama-88,1% amaqanda achumileyo. Xa ugcina iqanda kangangeentsuku ezingama-34 ngokugcinwa okufanelekileyo, ipesenti yokuqandusela kumaqanda ane-umbungu ochumileyo iya kuba, ngokomyinge, ngama-85,4%.
Kwiminyaka eliqela ndikhulisa iinkukhu kwi-incubator, ndineenkukhu ezisencinci unyaka nonyaka kwaye ndifuna ukwabelana ngamava am.
Ekuqaleni, nje ukuba ndiqalise ukubandakanyeka kwi-incubation, kukho iimpazamo ezininzi, ukuphoxeka okuninzi, kodwa emva kokusebenza kanzima ndafumana isiphumo esingcono.
Amaqanda kufuneka abekwe kwi-incubator ngokuhlwa ngentsimbi yesi-6, emva koko inkukhu yokuqala iya kuqanduselwa kusasa kwaye ezinye izithole ziya kubonakala imini yonke.
Ngokusisiseko, abo bazala iinkukhu zabo bazalela amaqanda kwi-incubator entwasahlobo ukuze bavuselele isitokhwe sabo.
Kwi-incubator, kuyimfuneko ukukhetha ngokuchanekileyo amaqanda, ukujonga ulawulo lomswakama kunye neqondo lokushisa ngexesha lokuphuhliswa kwee-embryos.
Ngobusika, ukubeka ihempe kuphulukene neevithamini ezininzi, ngoko ke entwasahlobo, ukufumana inzala esempilweni, kuya kufuneka ukuba uguqule kwaye ulungelelanise nesondlo seenkukhu, awuzukwazi ukufumana inzala elungileyo kwinkukhu ebuthathaka.
Ukwenza oku, kufuneka ungenise amaqabunga eklabishi aluhlaza, izaqathi, ikiti yemifuno emitsha kunye nezongezo ezahlukeneyo (ikhareji, iqokobhe, isidlo samathambo, iqokobhe leqanda elibilisiweyo, ikalika elivaliweyo ...) kukutya kwenkukhu.
Kwi-incubator, kuyimfuneko ukuthatha amaqanda phantsi kwenkukhu rhoqo emva kwe-1,5-2 iiyure, ukuba ushiya amaqanda ixesha elide, emva koko iinkukhu ziya kunyathela kuzo kwaye zinokonakalisa iqokobhe.
Amaqanda kufuneka aphakathi ngobungakanani, nokuba acocekile, acocekile, acocekile, ngaphandle komonakalo neetshipsi.
Andizange ndiwabeke amaqanda amancinci kunye amakhulu kwi-incubator
Amaqanda okufukama kufuneka agcinwe kubushushu be +8 ukuya kwi-15 degrees, ubomi beshelufu beentsuku ezi-5.
Ukuba amaqanda agcinwe ngaphezulu kweentsuku ezi-5, ukubekeka kwemihlambi emincinci kuyancitshiswa.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,446.